Kitra any Alzeria: lasan’i Ibrahim Amada, ny «ballon d’or» | NewsMada
Kitra any Alzeria: lasan’i Ibrahim Amada, ny «ballon d’or»
Par Taratra sur 19/01/2019
Tsy mitsahatra ny mametraka ny anarany, any amin’ireo klioba hilalaovany any ivelany any sy amin’ny fifaninanam-pirenena hatrehiny, ny mpilalao malagasy. Fantatra izao, fa norombahin’i Ibrahim Amada ny “ballon d’or”, tany Alzeria.
Natolotra an’i Ibrahim Amada, ilay mpilalao baolina malagasy, ao amin’ny ekipan’ny Mouloudia Clud d’Alger, tamin’ny alarobia 16 janoary lasa teo, ny amboaran’ny mpilalao mendrika ho an’ny teratany vahiny “ballon d’or 2018”, miatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Alzeria.
Samy resy lahatra, tamin’ny fahaizana sy ny dingana tsara vitany, nandritra iny taom-pilalaovana lasa iny avokoa, ireo teknisianina rehetra sy ny mpiara-milalao aminy, indrindra fa ireo mpanao gazety ara-mpanatanjahantena, tao Alzeria, fa mendrika i Amada.
Tany Alzeria foana no nilalao i Amada, nanomboka ny taona 2011. Klioba dimy no efa nandalovany ka ny voalohany ny tao amin’ny JS Kabylie. Tsy nahatafiditra baolina izy tamin’izany. Vetivety foana ny fotoana nandalovany tao amin’io klioba io. Nifindra tao amin’ny AS Khroub indray izy ny taona 2012 ka baolina tokana ihany ny hany mba tafidiny. Ny taona 2012 ka hatramin’ny 2015, tao amin’ny USM El Harrach indray i Amada, no nilalao ka in-75 niakatra kianja izy tamin’izany ary nahafaty baolina 10. Tao amin’ny El Sétif indray ny taona 2015 ka hatramin’ny 2017 ka baolina roa ihany no tafidiny. Ao amin’ny MC Mouloudia kosa izy, hatramin’izao. Nahavita lalao 40 izy, tamin’izany ary nahatafiditra baolina 3.
Mety tsy ho ao Alzeria intsony
Araka ny loharanom-baovao, mety tsy ho afaka ny hijanona any Alzeria, intsony i Amada, noho ny taonany efa lehibe loatra, 29 taona ka tsy mifaraka amin’ny lalàn’ny asa any an-toerana, intsony.
Na izany aza, efa betsaka ireo klioba any Eoropa, no manara-maso sy mitilitily ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar, taorian’ny nahazoana ny tapakila hiatrehana ny Can 2019, ka anisan’izany, i Ibrahim Amada. Inoana fa tsy ho very anjavony izao ezaka nataony izao, indrindra fa mbola vonona ny haneho izany fahaizany izany, i Amada, any Egypta, mandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika 2019.
Tsiahivina, fa valo taona lasa no nisian’ity «ballon d’or» , tao Alzeria ity farany, ary dia izao miverina izao indray.